Dzhonatan Devis - unomphela multi--platinum Umculi waseMelika band edlala isitayela nu-metal, - Korn. Davis lubhakuza emhlabeni Umlandvomphilo izinganekwane eziningi, Jonathan yena iye yabhebhethekisa inhlebo izimemezelo zakhe inkanuko futhi izingxoxo. Ngakho, ukuthi ungaqala kanjani i-career walo mculi, futhi uma uye minikelo ekuthuthukiseni umculo rock?
Dzhonatan Devis akazange ahlupheke inkinga yokukhetha mkhakha: kusukela ingane isencane wayebakhathalela kuphela umculo ukudlalwa ku ezihlukahlukene zomculo. Ngaphezu kwalokho, uyise Davis kwakuhilela umculo umkhakha esitolo ephethwe amathuluzi ukuthengisa, kanye yokuqophela.
Kakade eminyakeni emihlanu, Davis wakwazi ukudlala imigqomo. Kukho konke ukuphila kwakhe wahlakulela lamakhono. Ukuze iphrojekthi Korn Dzhonatan ngokuvamile ahlala ukufakwa. Ngokwesibonelo, ama-drum okuyingxenye for Dirty isosha esihlatshelelwayo lwalotshwa studio kuyinto Davis.
Kuze kube manje, uhlu amathuluzi okungewakho Davis, iyamangalisa: kungcono bass nomtshingo nezigubhu kanye isiginci, ihabhu, upiyano kanye violin. Lo mdlalo iningi labo umculi ayekufunda esikoleni.
Zonke lokusungula Davis umsindo buhlungu ngempela: imibhalo ongaziwa, ukulele Dissonant. Futhi kwakungeyona ukuthi ngaphambi uJonathani wayengumngane izidakamizwa, bese kuya benzodiazepines. Kakade owaziwa, Davis wavuma ukuthi njengoba ingane waxhashazwa ngokobulili abadala. Uyise kumazwana amazwi anjengokuthi ayizange. Futhi Daddy ingoma lapho ukuhola umculi we band Korn ethulula imizwa yakhe ngale ndaba, has a umbhalo kudida kakhulu futhi esingalingani, ngakho ukwenza noma yiluphi iziphetho nzima.
Dzhonatan Devis akhuleka e bakhe iqembu kwentsha Duran Duran futhi The Cure. Kufika iminyaka 23 Davis azenzile Sexart iqembu. Kwakuphakathi esinye salezi ukusebenza umculi waphawula amalungu Ngokuzayo band Korn, ubani '90s ngokuthi LAPD
Guitarists Munky neNhloko okunikelwe Davis ukubajoyina. Kule ndaba, kukhona legend ukuthi, ngaphambi kokuphendula ozakwabo uJonathani waphuma waya iseluleko ummemezeli eshisiwe. Ngakho kwaba noma cha, akunandaba, ngoba Davis akazange abe ilungu Korn ngo-1993 futhi uhlala njalo kuze kube yilolu suku.
Kwakunzima ukuze ibone ukuthi yikuphi Korn iphrojekthi ngomculo wabo ongaziwa bekuyoba Innovator kanye umsunguli we uhlobo nu-metal. I-albhamu yakhe yokuqala ngaphansi kwegama efanayo ngokushesha ngemva kokudedelwa waya-platinum. Futhi ngamunye albhamu okwalandela baba-platinum ngokuhamba kwesikhathi. Abahlanganyeli ubani ngaphambilini iqembu elingaziwa minyaka yonke igcwala zonke izinkulumo ezintsha kwezokuzijabulisa. Kuze kube manje, kunzima ukuthola ehlonishwayo idwala iphrojekthi lokho kwakungeke wasebenza band Korn abaculi. Nazi nje uhlu encane collaborations lezinkanyezi Jonathan Davis: Limp Bizkit, Evanescence, Coal Chamber, Linkin Park, The Cure, Deftones nabanye abaningi.
Devis Dzhonatan: albhamu Korn iqembu
Njengoba kushiwo ngenhla, Davis abahambele lo amarekhodi azo zonke albhamu band Korn. Eyokuqala umsebenzi studio ithimba, eyanyatheliswa ngo-1994, kwaba Ukushaywa esinzima kakhulu. emisha Omkhulu wazibonakalisa ukunamathela esindayo funk zensimbi-hip-hop Motifs. Dzhonatan Devis ukungezwa ku-vocal bendabuko ilandelela lokuhweba wakhe Esekelwa vocals - ukukhala inarticulate.
Ngo-1996 washiya Life is Peachy, ne hits yayo ADIDAS, Ayikho Indawo Ukuze Fihla futhi uNkulunkulu Omuhle. Ithimba umsindo baba ngisho mnyama futhi usinda. Kwatholakala ukuthi drive ahlukene ngokuphelele Landela UMholi, wadedelwa ngo 1998. umsindo ulula futhi kuyindida ngaphezulu. Ividiyo ingoma Freak On A Leash baphotha hhayi kuphela kuzo zonke iziteshi American umculo, kodwa futhi ngesiRashiya.
Special ezicini zonke kwaba i-albhamu Indlela ngokuphelela, eyakhishwa ngo-2011. Eqenjini lokuqala emlandweni umculo elixutshwe esindayo Dubstep metal. I-albhamu yokugcina Paradigm Shift Korn akazange uzizamele Dubstep, wabuyela umsindo nzima, kodwa ukusebenzisa eningi synthesizers electronic.
umsebenzi Davis 'solo
Dzhonatan Devis, kanye Richard Gibbs eqoshiwe izingoma ukuze vampire ifilimu "Indlovukazi Damned." Lo msebenzi ngakho liphefumulelwe Davis ukuthi wayengumuntu ngo-2007, ngangifuna Skate ukuvakasha acoustic, okuyinto wayehamba ukwenza iculo kusukela movie.
Davis futhi liyajabulisa umculo electronic, ngakho ngo-2012 ngaphansi mbumbulu JDevil ikhiphe solo EP.
Dzhonatan Devis nomkakhe, Lowo okuzala ngezinhlungu zokubeletha kwendodana yakhe yokuqala, ohlukanisile 2001, kwesibili nokunwebeka Korn vocalist baba actress porn Deven Davis, Lowo okuzala ngezinhlungu zokubeletha ngaphezulu abafana umculi ezimbili.
Dzhonatan Devis, obude - 188 cm, nophawu Capricorn. Kusukela ngo-1998, lo mculi akasebenzisi izidakamizwa notshwala. Lesi sinyathelo nobuqhawe ke kwaphoqa ubuyise. Ngokusho Davis, ngolunye usuku wafika ekhaya umthamo, kodwa wabona amehlo ethukile lendodana yakhe futhi wanquma ukuthi ziphume izidakamizwa. Lo mculi iye bahileleke emfundweni yezingane: paparazzi ngokuvamile bambambe ku uhamba ndawonye nezingane zabo.
iculo Davis 'okuthandayo kusuka umsebenzi iqembu lakhe kukhona Dirty, Ingabe Lokho Abakushoyo futhi elingenalutho Life. Wabuye uthanda i-albhamu Korn abakhishwa inyumbazane. Izingoma enhle kakhulu kusuka lokhu kukhululwa - Lapha Ukuhlala, Alone I Break, futhi ukucabangela.
Ngakolunye uhlangothi ngesikhathi band Korn vocalist anesithombe tattoo HIV. Lapho exoxa ne-Davis alisho lutho ezinengqondo mayelana lokuthi kungani wakwenza.
Zonke amakhonsathi Korn Davies sinikeza ukuma esikhethekile microphone, kwakusalandelwa isiko ezenziwe umculi Swiss.